Lacag aan ka xaday hooyadey ayaan malaayiin ka macaashay - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka GRANT TRIPLOW
Image caption Andrew Michael ayaa malaayiin doolar ka sameeyay lacagtii uu xaday
Markii uu Andrew jiray 17 sano, waxaa uu go'aan ku gaaray in uu wax ka baddalo noolashiisa, isagoo na tallabaadaasi ku qarash gareeyay lacag dhan 40 kun oo doolar oo ay laheyd hooyadii oo aanan ka warheyn lacagta uu ka xaday.
"Dhammaan shirkadaha hirgaliya website-yada U.K ee xiligaasi waxay ahaayeen shirkado waaweyn"Waxaa sidaasi sheegay Andrew oo ay hadda da'diisu tahay 39 jir, waxaana uu intaa raaciyay in shirkadaha yaryar iyo shakhsiyaad ay doonayeen mareeg uu hirgalisa wabsite aad u sahlan oo uu qofka adeegsan karo.
Lahaanshaha sawirka ANDREW FOSKER/PINPEP
Image caption Andrew iyo saaxiibkii
Isaga iyo saaxiibbadii waxay go'aansadeen inay buuxiyaan baahidii ka jirtay dhanka suuqa, waxaana ay aasaaseen mareeg ama website ay iyagu leeyihiin oo lagu magacaabo Fasthosts.
"Waxaan qolkeyga ku heysanay Kumbuyuutarradii aan u baahneyn, oo waxaan sameysanay aalad, waxa kaliya ee aan u baahneyn ayaa waxay ahayd intarnet xawaarihiisu dheereeyo oo xiligaasi aad u adkaa, lacagtii ku bixi lahayd na aanan haysan." Ayuu raaciyay Andrew.
Markii ay xaaladdu ku adkaatay Andrew ayaa waxa uu go'aansaday in uu xado lacag ku jirtay kaarka bangiga ee hooyadii, waxaana uu ku sameystay Intarnet xawaaro fiican iyo xayeysiimo.
Lahaanshaha sawirka ANDREW MICHAEL
Image caption Andrew waxaa uu la kulmay ganacsato caan ah oo uu kamid yahay Richard Branson
Sagaal sano kadib markii uu asaasay shirkadda Fasthosts, waxa uu iska iibiyay saami ku kacay lacag dhan 61.5 milyan oo gini, halka da'diisu marka ay ahayd na 26 jir uu haysatay saami dhan boqolkiiba 75 oo u dhigma 46 milyan oo gini.